Otú Otu Nwaanyị Si Kwụsị Ikpe Okpukpe Ndị Juu | Interview
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Xhosa Zulu
AJỤJỤ ỌNỤ | RACQUEL HALL
O nwere otu nwaanyị aha ya bụ Racquel Hall. Mama ya bụ onye Izrel, na-ekpekwa okpukpe ndị Juu. Papa ya abụrụ onye Ọstria, mechaakwa kpewe okpukpe ndị Juu. Nne nne ya na nna nne ya nọ n’òtù na-ahụ na e nweghachiri mba Izrel. Ha bịara biri n’Izrel n’afọ 1948. Ọ bụkwa n’afọ ahụ ka Izrel nke ugbu a malitere. Ndị na-ede Teta! jụrụ Racquel ihe mere o ji kwụsị ikpe okpukpe ndị Juu. Lee ihe ọ gwara ha.
Gịnị ka ị ga-agwatụ anyị gbasara onwe gị?
A mụrụ m n’Amerịka n’afọ 1979. Papa m na mama m gbara alụkwaghịm mgbe m dị afọ atọ. Ma, mama m kpọọrọ m. Ọ kụziiri m omenala ndị Juu, tinyekwa m n’ụlọ akwụkwọ a na-anọ azụ ndị Juu. Mgbe m dị afọ asaa, anyị gara biri n’Izrel. Anyị nọrọ n’ebe ahụ otu afọ. Mgbe ahụ anyị bi n’ebe ahụ, m na-aga akwụkwọ n’ebe ndị na-ekpe okpukpe ndị Juu na-aga akwụkwọ. Mụ na mama m mechakwara gaa biri na Meksiko.
E nweghị ụlọ okpukpe ndị Juu n’ebe anyị bi, ma ahapụghị m omenala ndị Juu. M na-amụnye kandụl n’Ụbọchị Izu Ike ọ bụla, na-agụkwa akwụkwọ ndị okpukpe anyị. M chọọ ikpe ekpere, mụ agaa buru akwụkwọ ekpere na-agụ. M gaa akwụkwọ, ihe m na-agwakarị ụmụ akwụkwọ ibe m bụ na okpukpe ndị Juu ka okpukpe ndị ọzọ mma. N’oge ahụ, anaghị m agụ Agba Ọhụrụ n’ihi na ọ bụ na ya ka e dere otú Jizọs si jee ozi nakwa ihe ndị ọ kụziri. Ọ bụ mama m gwara m ka m ghara ịgụ ya n’ihi na ọ ga-eduhie m.
Gịnị mere i ji malite ịgụ Agba Ọhụrụ?
Mgbe m dị afọ iri na asaa, alaghachiri m Amerịka ka m gaa gụchaa akwụkwọ. N’ebe ahụ, otu nwa akwukwọ anyị sị na ya bụ Onye Kraịst gwara m na ndụ m agaghị enwe isi ma ọ bụrụ na mụ ekweghị na Jizọs.
“M gwara ya na o nweghị onye ọ bụla ma ihe ga-ekwe na Jizọs.
Ọ jụrụ m ma ò nwetụla mgbe m gụrụ Agba Ọhụrụ.
Mụ asị ya mba.
Ya asị m: “Ọ bụrụ otú ahụ, í cheghị na ị na-ekwu ihe na-edoghị gị anya?”
Ihe a o kwuru ruru m n’ahụ́ n’ihi na m na-ekwukarị na onye ọ bụla na-ekwu ihe na-edoghị ya anya bụ onye iberiibe. N’ihi ya, m weere Baịbụl ya laa n’ụbọchị ahụ, malitekwa ịgụ Agba Ọhụrụ.
Olee otú ihe ị gụtara si nyere gị aka?
Ị̀ makwa na amabughị m na ọ bụ ndị Juu dere Agba Ọhụrụ? Ọ bụ mgbe m bidoro ịgụ ya ka m chọpụtara na ọ bụ ha dere ya. Ihe ọzọ bụ na m bịara chọpụta na Jizọs bụ onye Juu, nakwa na o nwere obiọma, dịrịkwa umeala n’obi. Achọpụtakwara m na o nyeere ndị mmadụ aka, o nweghị mgbe o megburu ha. A gadịrị m n’ọ́bà akwụkwọ were akwụkwọ ndị kwuru banyere Jizọs gụọ. Ma, o nweghị nke mere ka o doo m anya na ọ bụ yanwa bụ Mesaya. Ụfọdụ n’ime ha kwudịrị na Jizọs bụ Chineke. Ma, ama m na ọ bụghị eziokwu. Baịbụl kwuru na Jizọs kpegaara Chineke ekpere. A sị na Jizọs bụ Chineke ọ pụtaranụ na ọ bụ onwe ya ka o kpegaara ekpere. Ihe ọzọ bụ na Jizọs mechara nwụọ mgbe ọ bịara n’ụwa, ma Baịbụl kwuru na Chineke anaghị “anwụ anwụ.” *
Olee otú i si mata nke bụ́ eziokwu?
Ị manụ na eziokwu anaghị emegide onwe ya. M bịara kpebie na m ga-achọpụta nke bụ́ eziokwu. N’ihi ya, ekpegara m Chineke ekpere. Na nke ugbu a, ejighị m akwụkwọ ekpere, o si m n’obi. O teghị aka m kpechara ekpere ahụ, mmadụ akụọ aka n’ụzọ m. Mgbe m meghere ụzọ, ahụrụ m Ndịàmà Jehova abụọ. Ha nyere m akwụkwọ ha ji amụ Baịbụl, mụ na ha ana-amụkwa ya. Nke a mere ka m kweta na ihe ndị ha na-akụziri m si na Baịbụl. Dị ka ihe atụ, Ndịàmà Jehova kweere na Jizọs bụ “Ọkpara Chineke,” * ọ bụghị atọ n’ime otu. Ha kwekwara na ọ bụ onye mbụ Chineke kere. *
Ọ dịghị anya mụ na Ndịàmà Jehova mụwara ihe, mụ alaghachi Meksiko. Mgbe m ruru ebe ahụ, mụ na ha bidokwara na-amụ amụma ndị kwuru gbasara Mesaya. Obi dị m ụtọ mgbe m chọpụtara na o nwere ọtụtụ amụma kwuru gbasara Mesaya. Ma, m ka nọ na-enwe obi abụọ. M bịara na-eche ma ọ̀ bụkwa naanị Jizọs ka ihe ndị e kwuru gbasara Mesaya mezuru n’isi. M chekwara na o nwere ike ihe Jizọs kwo mee ihe ndị o mere bụ ka ndị mmadụ chee na ọ bụ yanwa bụ Mesaya.
Gịnịzi mere i ji kweta na Jizọs bụ Mesaya?
Ndịàmà Jehova ahụ gosiri m amụma ndị ọzọ. Onye ọ bụla nụrụ gbasara ha ga-ama na o nweghị onye ga-ejili aka ya mee ka ha mezuo n’isi ya. Dị ka ihe atụ, ihe karịrị narị afọ asaa tupu a mụọ Mesaya, Maịka onye amụma kwuru na a ga-amụ ya na Betlehem nke Judia. * O nweghị onye n’ime anyị ga-eji aka ya kwuo ebe a ga-amụ ya. Aịzaya bukwara amụma na Mesaya ga-anwụ ọnwụ ihere ka onye ohi. O kwukwara na a ga-eli ya n’ebe a na-eli ndị ọgaranya. * Ọ bụ naanị n’isi Jizọs ka ihe a niile mezuru.
Ihe ikpeazụ ha gwara m bụ gbasara ezinụlọ Jizọs si. Baịbụl kwuru na Mesaya ga-esi n’ezinụlọ Eze Devid. * N’oge ochie, ndị Juu na-edekarị ezinụlọ mmadụ si n’akwụkwọ. A sị na Jizọs esighị n’ezinụlọ Devid, ndị iro ya gaara ekwu ya. Ma, o nweghị mgbe ha kwuru na ọ bụghị eziokwu n’ihi na a naghị enyo ya enyo. Ndị mmadụ kpọdịrị ya “Nwa Devid.” *
Mgbe Jizọs nwụrụ, ihe dị ka afọ iri atọ na asaa agaakwa, ndị agha Rom bịara bibie Jeruselem. Ihe a mere n’afọ 70 Oge Ndị Kraịst. Nke a pụtara na Mesaya ga-abịarịrị tupu e bibie Jeruselem. Ihe mere m ji kweta ya bụ na akwụkwọ ndị ahụ e dere ezinụlọ ndị Juu furu mgbe ahụ e bibiri Jeruselem. A sị na Mesaya ahụ abịaghị tupu mgbe ahụ, o nweghị otú a gaara esi ama ezinụlọ o si.
Olee ihe i mere mgbe ị matara ihe a niile?
At Deuteronomy 18:18, 19, it was foretold that God would raise up iDiuterọnọmi 18:18, 19 kwuru na Chineke ga-esi n’Izrel họpụta otu onye amụma ga-adị ka Mozis. Chineke kwukwara, sị: “Onye na-egeghị ntị n’okwu m ndị ọ ga-ekwu n’aha m, mụ onwe m ga-emekwa ka ọ zaa ajụjụ maka ya.” Otú m si mụọ ma Agba Ochie ma Agba Ọhụrụ nke ọma mere ka o doo m anya na ọ bụ Jizọs onye Nazaret bụ onye amụma ahụ.
^ para. 15 Habakọk 1:12.
^ para. 17 Jọn 1:34.
^ para. 17 Mkpughe 3:14.
^ para. 20 Maịka 5:2; Matiu 2:1.
^ para. 20 Aịzaya 53:3, 7, 9; Mak 15:43, 46.
^ para. 21 Aịzaya 9:6, 7; Luk 1:30-32. Matiu isi mbụ kwuru gbasara ezinụlọ papa Jizọs, Luk isi atọ ekwuo gbasara ezinụlọ mama ya.
^ para. 21 Matiu 21:9.